Kooriyaan Kaabaa Misaa’eela Baalaastikaa 2ffaa furgugsifte – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Kooriyaan Kaabaa Misaa’eela Baalaastikaa 2ffaa furgugsifte
On Jan 11, 2022 205
Finfinnee, Amajjii 3, (FBC) – Kooriyaan Kaabaa Misaa’eela Baalaastikaa torbee tokko keessatti yeroo 2ffaaf gara qarqara Galaanaa Baha biyyattiitti furgugsisuu ibsameera.
Biyyattiin guyyoota 6 dura Misaa’eela Baalaastikaa Hayparsooniik jedhamu milkiin kan furguugsifte yoo ta’uu, guyyaa har’aa Misaa’eela Baalaastikaa 2ffaa furguugsifteerti.
Humnoonni Waraanaa Kooriyaa Kibbaa ibsa waloon laataniin Kooriyaan Kaabaa Misaa’eela Baalaastikaa lafarraa gara Qarqara Galaanaa Baha biyyattiitti dhukaasuu ishee himaniiru.
Misaa’eelli Baalaastikaa 2ffaa Kooriyaa Kaabaa kun Kooriyaa Kibbaa daraan dallansiisuu ibsameera.
Humnoonni Waraanaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaan yaaliin Misaa’eelaa Kooriyaa kaabaa Kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedhame.
Waajjirri Muummee Ministiraa Jaappaanii fi Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa biyyattii Misaa’eelli Kooriyaan Kaabaa Furguugsifte Misaa’eela Baalaastikaa ta’uu eeruun yaada dabalataa laachuurraa of qusataniiru.
Kooriyaan Kaabaa irra deddeebiin Misaa’eela furguuguu hordofee miidhaan qaqqabe kan hin jirre ta’uu Muummeen Ministiraa Jaappaan Fuumiiyoo Kiishiidaan ibsaniiru.
Aanga’oonni biyyattii nageenya Dooniwwanii fi Xiyyaaroota naanawaa sana jiran sakattaa’aa jiraachuu kaasaniiru.
Manni Maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Misaa’eeloota Kooriyaan Kaabaa hanga ammaatti furguugsifte ilaalchisee wayita marii taasiisaa jiru biyyattiin ammaas Misaa’eeloota dhukaasuun ishee nama gaddisiisa jechuun ibsaniiru.
Ityoo Telekoom neetwoorkii moobaayilii dhaloota 5ffaa (5G) eebbisiisaa jira
Yaa’iin Innooveeshinii Diijitaalaa Afrikaa 19ffaan…